petroleum imishini CMC & PAC - China Shandong Yulong cellulose
petroleum imishini CMC & PAC CMC ne-PAC kufanele kabanzi petroleum imishini ensimini. Ikakhulu njengoba viscosifier, ukulawula rheology ejenti kanye uketshezi ukulahlekelwa ejenti esetshenziswa imishini uketshezi, kanye nekhono namandla sokumiswa, ethwele imishini ukusika ngempumelelo, ukuvikela odongeni Borehole, ekuvimbeleni ukulahlekelwa udaka, ukuvikela sokuprakthiza futhi thinning ukushuba we ikhekhe odakeni; Kuyinto efanelekile ngoba amanzi ahlanzekile, amanzi olwandle futhi elihlale amanzi usawoti udaka ngamathe okusezingeni eliphezulu isivuno isilinganiso, ukumelana enhle alikhali futhi elwa namagciwane eqinile ...
CMC futhi PAC kufanele kabanzi petroleum imishini ensimini. Ikakhulu njengoba viscosifier, ukulawula rheology ejenti kanye uketshezi ukulahlekelwa ejenti esetshenziswa imishini uketshezi, kanye nekhono namandla sokumiswa, ethwele imishini ukusika ngempumelelo, ukuvikela odongeni Borehole, ekuvimbeleni ukulahlekelwa udaka, ukuvikela sokuprakthiza futhi thinning ukushuba we ikhekhe odakeni; Kuyinto efanelekile ngoba amanzi ahlanzekile, amanzi olwandle futhi elihlale amanzi usawoti udaka ngamathe okusezingeni eliphezulu isivuno isilinganiso, ukumelana enhle alikhali futhi izakhiwo eziqinile elwa namagciwane. It has ukuzinza ezinhle ezishisayo, futhi kunganciphisa namanje ngempumelelo ukulahlekelwa amanzi ashisa ngaphezu 150 ℃.
Esikhathini uketshezi ekupheleni, ikakhulu elawula viscosity uketshezi, Kumiswe isisindo, uthwala yamathebhu futhi ukuvimbela ukulahleka uketshezi.
viscosity High CMC ingasetshenziswa uketshezi aphuke, ngokushesha ngcono viscosity aphuke uketshezi, ngempumelelo baphathe proppant ku uwoyela kahle ukwa ukusungula iziteshi seepage, ngokushesha inciphise ukulahlekelwa uketshezi, avuke ingcindezi ukwakheka ngokushesha ukufeza ukudluliswa efanele ingcindezi, wenze umkhiqizo ngaphandle ezisalayo futhi akukho ukulimala kumiswa.
Amafutha imishini imikhiqizo uketshezi: CMC-HV, CMC-LV, i-PAC-LV , PAC-R , PAC-HV
Aphuke imikhiqizo uketshezi: GFH6000
Imikhiqizo isilandela GB / T 5005, i-API 13A, amazinga OCMA.
Okulandelayo: sodium croscarmellose (CCNA)
Pac HV Ukuze Oil Drilling Ibanga PAC Abakhiqizi-China
PAC Oil Drilling Ibanga